လမင်းခင်: May 2010
လူထုတိုက်ပွဲကော်မတီ ဦးဆောင် ဒေါ်စန်းစန်း မှ ဒီပဲယင်းဖြစ်စဉ်အား ပြောပြ
Posted by LRDP at 10:55 AM0comments Links to this post
ဒီပဲယင်း အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု (၇) နှစ်ပြည့် သော်လည်း ဥဒါန်းမကြေ
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက် မြို့ တွင် ဒီပဲယင်း အကြမ်းဖက် လူသတ်မှု (၇) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် ကို လူထုတိုက်ပွဲ
ကော်မတီ(၂၀၁၀) မှ ကျင်းပခဲ့သည့်ပုံဖြစ်သည်။။ နံက်ပိုင်းတွင် ကျဆုံးကွယ်လွန် ခဲ့သည် အဖွဲ့ ချုပ် အဖွဲ့ ဝင်
များ ကျည်ရွာသားများ နှင့် ဒီမိုကရေစီလိုလားသော ပြည်သူများအတွက် ဘုန်းကြီး အားဆွမ်းကပ်လှူတမ်းခဲ့
ပြီး နေ့ ခင်းပိုင်းတွင် ပြည့်သူ့ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ် လူထုတိုက်ပွဲကော်မတီ ဦးဆောင် ထဲမှတစ်
ဦးဖြစ်သည့် ဒေါ်စန်းစန်းမှ ပထမဦးစွာ ဒီပဲယင်းဖြစ်စဉ်အားရှင်းပြပြီး ဆက်လက်၍မကွေးတိုင်း ဒုတိယ ဥက္ကဌ
မင်းလှမြို့ နယ်ပြည်သူ့ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးချစ်တင် ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် လူငယ်ခေါင်း
ဆောင် သထုံအမှတ်(၁) ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ခွန်မြင့်ထွန်း ဒီပဲယင်း လူသတ်မှု လူထုခေါင်းဆောင်
အားလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ ဆက်လက် ရှင်းပြ ခဲ့ပါသည်။
Posted by LRDP at 9:20 PM0comments Links to this post
ဒီပဲယင်း လူသတ်မှု ကိစ္စ အရိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ ကာယကံရှင် ဘာပြော လဲ ?
ကိုတိုးလွင်က အားကုန် အော်လိုက်တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကား အဲဒီတော့တပည့်တော်တို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကားကိုရိုက်ရင် ဘာဖြစ်သွား
မလဲ? မြန်မာနိုင်ငံမှာကော ဘာဖြစ်မလဲ? ၊ နိုင်ငံတကာမှာကော ဘာဖြစ်မလဲ ? မင်းတို့ ရော ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ
သိရဲ့လား ဆိုပြီးစွတ်အော်တယ် -ကုန်းအော်တော့ ကျနော်လည်းသတိရတာနဲ့ဟေ့ကောင်တွေ မရိုက် နဲ့ ဆိုပြီး
ဒီမနက် မှ ကျမ ဒီဗွီဘီ သတင်း ကိုဖတ်မိတာပါ။
ကွင်းက ဖြစ်စဉ် တကွက်လေးကို ပြန် ပြောပြတဲ့စာသားကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါ ကျမရင်စို့ ပြီ မျက်ရည် ကျ လာပါတယ် ။ "နောက်ကား ဒုတိယကားကို စရိုက်တယ်။အဲဒီ့ကားပေါ်လုံခြုံရေးယူနေတဲ့ကလေးတွေ ခုန်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့ ကားကို ရံထားလိုက်တယ်။။
ကျနော်တို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလုံခြုံရေးယူနေတဲ့ ကိုတိုးလွင် ။ ကိုတိုးလွင်ညာဖက်မှာကျွန်တော်။ကျနော့်
ဘေးမှာဦးတင်အောင်အောင် -- အဲလို ဖြစ်နေတုန်းမှာသင်္ကန်းဝတ်တွေ ဗြုန်း ဆိုရောက်လာတယ်--ပြောရင်း
ဆိုရင်း ရောက်လာတာပေါ့နော်- ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ ကိုတိုးလွင်က အားကုန် အော်လိုက်တယ်။
တွန်းအော်တယ်-- တဲ့ဒီနေရာအထိပဲကျမ ဖတ် နိုင်ပြီး -နံက်အစောကြီး မှာ ဘုန်းကြီးဆွမ်း ထချက် နေတုန်း
ကွန်ပျူတာ ခန ဖွင့် လိုက်တာ မျက်ရည်တွေ နဲ့ဆွမ်းဟင်းချက် ဖြစ်နေပါတယ် - ဖြစ်စဉ်မှာလက်တွေ့ ပါခဲ့တဲ့
ကိုတိုးလွင် ကို အချုပ်ကလွှတ်လိုက်တော့ သူ့ ခေါင်းမှာ ချုပ်ရိုးတွေ အပြည့် နဲ့ကျမတွေ စဉ် က လည်း အံတွေ
ကြိတ်ပြီး ဒီ သွေးကြွေး အတွက် လုံးဝကို အကြေနပ် နိုင်ပါဘူး။ ဒါကို ကျော် ဖြစ်ပြီး သန်းရွှေကို စကားပြောကြ
ရအောင် လို့ကမ်းလှမ်းနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကျမတို့ အဖွဲ့ချုပ်ကြီး နဲ့ပြည်သူအတွက်အနစ်
နာခံနေမှုကို လည်း ကျ မ တကယ်ကိုရင်နင့် ရပါတယ် -ကျမတို့ကတော့ အမှန်တရားအတွက် နည်းလမ်းပေါင်း
စုံနဲ့ဆိုတဲ့တိုက်ပွဲလမ်းစဉ် ကလွဲ လို့အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး။
( ဘဘ ဦးတင်ဦးပြောတဲ့ သတင်း အပြည့်အစုံ ကို DVB မှာ ဖတ် ပါရန်)
Posted by LRDP at 6:08 PM0comments Links to this post
အရင်ကလည်း ဒုက္ခပေးခဲ့တယ်၊ အခုထိ ဒုက္ခပေးနေဆဲ၊ နောက်လည်း ဒုက္ခပေးဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ ဆက်ငုံ့ ခံနေရင်တော့ -
အာဏာရှင်ကြီး နေ၀င်း ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ (မဆလ) ဆိုတဲ့ တစ်ပါတီ အာဏာရှင်အစိုးရ လက်ထက်ကတည်းက နေ၀င်းရဲ့လူယုံတော်လက်ပါးစေတွေအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ မဆလခေတ် ဗိုလ်မှူးကြီး ဗိုလ်ချူပ်ကြီးတွေက အခုချိန်အထိ တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူကို ဒုက္ခပေးနေဆဲပါလား။
အာဏာရှင်ကြီး နေ၀င်း အုပ်ချူပ်နေစဉ် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ရှစ်လေးလုံး ပြည်သူလူထုအုံကြွလှုပ်ရှားမှုကြီး ဖြစ်တဲ့အခါမှာ တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ် ပြိုကျပျက်သုန်းခဲ့လို့တိုင်းပြည်ကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကနေ နှစ်ပေါင်း (၂၆) နှစ်တိုင်အောင် ဖိနှိပ်အုပ်ချူပ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီနဲ့နေ၀င်း အာဏာရှင်အစိုးရတစ်ဖွဲ့ လုံး ကျဆုံးရပ်တန့် သွားခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် နေ၀င်းအာဏာရှင်ရဲ့အမာခံလက်ပါးစေကြီးတွေကတော့ ကျန်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတယ်ဆိုပြီး ပြည်သူ့ အာဏာကို နောက်တစ်ကြိမ် လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်ပြီး ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားပြည်သူများစွာကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ကာ အာဏာရူးလက်သစ် ဖြစ်တဲ့ စောမောင်ကနေ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးအဖွဲ့(န၀တ) ဆိုပြီး အသွင်ပြောင်းပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့စိုးမိုးဗိုလ်ကျအုပ်ချူပ်လာတဲ့အချိန်မှာ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတဲ့အခါမှာတော့ စောစောက ပြောတဲ့ အာဏာရှင်ကြီး နေ၀င်းရဲ့အမာခံတပည့် လက်ပါးတော် ဗိုလ်မှူးကြီး ဗိုလ်ချူပ်ကြီးတွေက ယူနီဖောင်းလဲ အရပ်ဝတ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရအောင် ပြန်လည်ပါဝင် ခေါင်းထောင်လာကြပါတယ်။
အာဏာရှင်ကြီး နေ၀င်း အာဏာပြုတ်ကျသွားလို့အခြေအနေယိမ်းယိုင်ကာ တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားသလိုနဲ့ပုန်းလျှိုးနေတဲ့ အာဏာရူးလက်သပ်မွေး လက်ပါးစေကြီးတွေဟာ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ (တစည) ဆိုတဲ့ အသွင်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပြည်သူက ရှုတ်ချကန့် ကွက်ခဲ့ကြလို့အနိုင်မဲ မရဘဲ အရှက်တကွဲနဲ့အရှုံးကြီး ရှုံးကာ မဆလခေတ်ဟောင်း ဗိုလ်မှူးကြီး ဗိုလ်ချူပ်ကြီးများရဲ့တစညပါတီဟာ တစ်ခါပြန်ပြီး ပုန်းအောင်းသွားပြန်တယ်။
အခုတစ်ခါ အာဏာရူးကြီး သန်းရွှေလက်ထက် နအဖအာဏာတည်မြဲရေးနဲ့တရားဝင် ရုပ်သေးအစိုးရပေါ်ပေါက်ရေးတို့ အတွက် သဲသဲမဲမဲ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ် နအဖရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြန်လည် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ အတွက်ဆိုပြီး ဥက္ကဌနဲ့အဖွဲ့ ဝင်တွေ ပြောင်းလဲကာ အသက်ပြန်သွင်းလာတဲ့ ပါတီက စောစောက ပြောတဲ့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ (တစည) ဘဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
အာဏာရှင်ကြီး နေ၀င်းလက်ထက်မှာလည်း စစ်တပ်ရာထူးကြီးကြီးမားမားတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကို မွဲပြာကျအောင် ဒုက္ခပေးခဲ့တယ်။ န၀တ အာဏာရှင် စောမောင် လက်ထက်မှာလည်း တစညပါတီကို တည်ထောင်ပြီး ယူနီဖောင်းချွတ် အရပ်ဝတ်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကို ဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြန်တယ်။ အခုလည်း အာဏာရူးကြီး သန်းရွှေလက်ထက်မှာ မတရားပြဌာန်းလိုက်တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နအဖ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ စစ်တပ်က ၂၅% ဘက်အပြင် အခြားကျန်နေတဲ့ဘက်ကနေ လှည့်ဖြားဝင်ဖို့ အတွက် လက်ရှိ စစ်တပ်က ဗိုလ်ချူပ်ကြီးတွေ ယူနီဖောင်းချွတ် အရပ်ဝတ်လဲတဲ့အပြင် မဆလခေတ်ဟောင်း ဗိုလ်မှူးကြီး ဗိုလ်ချူပ်ကြီးဟောင်းတွေကလည်း တစညပါတီ အသက်ပြန်သွင်းပြီး တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူကို အထပ်ထပ် အခါခါ ဒုက္ခထပ်ပေးဖို့လုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ အင်မတန်ကို လွန်လွန်းလှပါတယ်။
အာဏာရှင် မဆလခေတ်တုန်းက ကျွန်တော်တို့အဘိုးအဘွားတွေကို ဖိနှိပ်ချူပ်ချယ်ခဲ့လို့အားမရသေး၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ် အာဏာရူး စောမောင်လက်ထက်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားပြည်သူတွေကို သတ်ဖြတ်ယုတ်မာခဲ့လို့အားမရသေး၊ အခု အာဏာရူး သန်းရွှေလက်ထက်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ပြည်သူ့ ရင်သွေး မျိုးဆက်သစ်လေးတွေကို စစ်တပ်ကျွန်ဘ၀ ဆက်သွင်းပြီး ဖိနှိပ်ချူပ်ချယ် အုပ်ချူပ်ဦးမယ်ဆိုတော့ဗျာ၊ ဒီ သေခါနီး မဆလခေတ်က ဗိုလ်မှူးကြီး ဗိုလ်ချူပ်ကြီးဟောင်းတွေ အသက်ကြီးပြီး မိုက်ရိုင်းနေတုန်း မိုက်ရိုင်းနေဆဲပါလားဗျာ။
ဒီ မဆလခေတ်က ဗိုလ်မှူးကြီး ဗိုလ်ချူပ်ကြီးဟောင်းတွေရဲ့တစညပါတီကို မဲပေးရမယ့်အစား ကိုယ်ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ ဒုက္ခမရောက်ဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ် တုံးတိုက်တိုက် ကျားကိုက်ကိုက် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်း သေသွားကြတာကမှ သေသောဝ်မှတည့် သြော် ကောင်း၏ဆိုတဲ့ အဆိုစကားအတိုင်း တန်ဖိုးထိုက်တန် မြတ်ဦးမယ်။
ဒီ မဆလခေတ်က ဗိုလ်မှူးကြီး ဗိုလ်ချူပ်ကြီးဟောင်းတွေရဲ့ လမ်းစဉ်အတိုင်း ပုံတူလုပ်နေကြတဲ့ အာဏာရူးသန်းရွှေတို့ ရဲ့ဗိုလ်ချူပ်ကြီးများကလည်း အချို့ က လက်ရှိ စစ်ယူနီဖောင်းနဲ့၂၅% ဘက်ကနေ လှည့်ဝင်၊ ကျန်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းဘက်က ယူနီဖောင်းချွတ်ပြ အရပ်ဝတ်လဲဟန်ဆောင်ပြီး ၀င်ပြနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာ သူတို့ အားလုံး ဟိုဘက်ကရော ဒီဘက်ကရော လှည့်ပတ်ပြီး ၀င်ရောက်ကာ အကွက်ချစီစဉ်တဲ့ မျက်နှာဖုံးပြောင်းပွဲကြီးသာ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
မဆလခေတ်က ဗိုလ်မှူးကြီး ဗိုလ်ချူပ်ကြီးဟောင်းတွေရဲ့တစညပါတီကို ဥက္ကဌ အဖြစ်တာဝန်ယူသူက ဦးထွန်းရီတဲ့။ ဦးထွန်းရီဆိုတာ မဆလခေတ် နေ၀င်းလက်ထက်မှာ နေ၀င်းလူယုံတော် လက်ပါးစေ ဒုဗိုလ်ချူပ်ကြီးဘဲ။ နောက်တစ်ယောက်က တစညပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဦးသန်းတင်တဲ့။ သူလည်း မဆလခေတ် နေ၀င်းလက်ထက်မှာ နေ၀င်းလူယုံတော် လက်ပါးစေ ဗိုလ်မှူးကြီးဘဲ။
အခု အသက်ပြန်သွင်းထားတဲ့ တစညပါတီရဲ့ဥက္ကဌ ဦးထွန်းရီဟာ စစ်တပ်ကိုယ်ပိုင်အမှတ် (ကြည်း ၅၀၉၆) ဖြစ်ပြီး ၁၉၇၂ ကနေ ၁၉၇၄ အထိ ခြေမြန်တပ်မဌာနချူပ် အမှတ် (၇၇) ကို ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့သူဘဲ။ ၁၉၇၄ ကနေ စပြီး ဗိုလ်မှူးချူပ် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ၁၉၈၁ မှာ ဒုတိယ ဗိုလ်ချူပ်ကြီးအဆင့်နဲ့ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ် (ကြည်း) တာဝန်ကို ယူကာ အာဏာရှင်ကြီး နေ၀င်းရဲ့လူယုံတော် လက်ပါးစေအရင်းကြီး ဖြစ်တယ်။
အခု တစညပါတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးသန်းတင်ကလည်း စစ်တပ်ကိုယ်ပိုင်အမှတ် (ကြည်း ၅၆၀၃) ဖြစ်ပြီး ၁၉၇၁ ကနေ ၇၄ အထိ အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချူပ်ကို ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်နဲ့ တာဝန်ယူခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ နောက် မဆလခေတ်မှာ ဒုဝန်ကြီးချူပ်အဆင့်အထိ တာဝန်ယူခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။
အခု တစညထဲမှာ ပါဝင်နေကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်တဲ့ ဦးချစ်လှိုင်က နေ၀င်းမဆလခေတ်က ဒုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရေ) နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတာဝန်ကို ယူခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ယောက် သူရဦးစောဖြူဆိုရင်လည်း နေ၀င်းမဆလခေတ်မှာ ဒုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) နဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး လုပ်ခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ယောက် ဦးထွေးဟန်ဆိုရင်လည်း နေ၀င်းရဲ့အာဏာရှင်တစ်ပါတီဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ (မဆလပါတီ) ရဲ့ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးကြီး ဖြစ်ခဲ့တယ်။
တစညပါတီကသူတွေ အားလုံးဟာ အာဏာရှင်ကြီး နေ၀င်းလက်ထက်က နေ၀င်းရဲ့အာဏာရှင်တစ်ပါတီနဲ့ နေ၀င်းအစိုးရအောက်မှာ လုပ်ခဲ့ကြသူ နေ၀င်းရဲ့တပည့်လက်ပါးစေ လူယုံတော်လက်သပ်မွေးတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ နအဖ အာဏာရူးသန်းရွှေက သူရဲ့ဆရာကြီး စီနီယာကြီးတွေကို ပသ ကိုးကွယ်ထားပြီး မဆလခေတ်ဟောင်းက ဒီအမျိုးအဆက်အနွယ်တွေကို အသက်ပြန်သွင်းတာကတော့ အာဏာရူးသန်းရွှေ မိုက်ရိုင်းတဲ့ လက်ချက်ပါဘဲ။
ကဲ - ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ခေတ်အဆက်ဆက် ဆက်တိုက် ဒုက္ခပေးလာသူတွေနဲ့လက်ရှိ ဒုက္ခပေးနေသူတွေဟာ တစ်စိတ်ထဲ တစ်ဥာဏ်ထဲ တစ်သွေးထဲ တစ်သားထဲ မိုက်ရိုင်းဆဲဆိုတာ တွေ့ ကြမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့အဘိုးအဘွား အဖေအမေ လက်ထက်လည်း အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ ဖိနှိပ်ချူပ်ချယ်ခံခဲ့ကြရတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ လက်ထက်လည်း အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ ဖိနှိပ်ချူပ်ခံရရုံတင်မကဖူး ဘ၀တွေ ပျက်သုန်းကြရတယ် …. အခု ဒီအာဏာရူးကြီးတွေနဲ့သူတို့အာဏာရှင်မျိုးဆက်ပေါက်စလေးတွေရဲ့ဖိနှိပ်ချူပ်ချယ်မှုအောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့မျိုးဆက်သစ်လေးတွေ ဒုက္ခအရောက်ခံကြမှာလား ပေးကြုံတွေ့ ကြမှာလား မြင်ရက်ကြမှာလား …..
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့မျိုးဆက်သစ်လေးတွေ ဒုက္ခအရောက် မခံစေချင်ရင် ပေးကြုံမတွေ့ စေချင်ရင် မမြင်ရက်ရင်တော့ လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းမှာ ဘ၀ပေး တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ သိကြဖို့ ပါဘဲ။ ကိုယ့်ခေတ်မှာ ကျရောက်လာတဲ့ ကိုယ့်ပုခုံးပေါ်က တာဝန်ကို ကိုယ် ရဲရဲဝန့် ဝန့် နဲ့တာဝန်ယူရဲကြဖို့ ပါဘဲ။
သင်္ချိင်းအောက်က တောက်ခေါက်သံတွေ
ငါ့ လျာကို ငါ ဖြတ်ပြီး
ဆွဲနုတ်လို့ ဖျက်ဆီးပစ်ချင်တယ် ။။
ကလိယုဂ် = ပျက်ဆီးယိုယွင်းလာသောခေတ်
ဒီပဲယင်း (ရ) နှစ် ပြည့် ကို ကြွရောက်ကြဖို့နဲ့ ကျဆုံးခဲ့သူပြည်သူတွေအတွက် အမျှဝေကြမယ်
Posted by LRDP at 11:01 AM0comments Links to this post
ဒီနေ့ဘဘဦးတင်ဦး အိမ်မှာေ၇ွးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ နှစ် နှစ်ဆယ်အမှတ်တရ ကျင်းပ ခဲ့တယ် ဘဘဦးတင်ဦးက
နှစ် ၂၀ တွင်း ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ ပါတီ အခြေအနေတွေ နဲ့ ပြောကြားပြီး ဘဘဦးဝင်းတင်ကတော့ သပိတ်မှောက်ရမယ်
ေ၇ွးကောက်ပွဲကိုမှတ်ပဲမတင်တာ သပိတ်မှောက်တာပဲ ပြည်သူတွေ လည်းရွေးကောက်ပွဲကိုသပိတ်မှောက်ရမယ်
သပိတ်မမှောက်နိုင်ရင်ဒီမိုကရေစီစော်နံနေတဲ့ အမတ်လောင်းတွေ ကို မဲထဲ့ နေရလိမ့်မယ် --
Posted by LRDP at 5:19 AM0comments Links to this post
ဒါ ဘယ်သူ့ မှာတာဝန်ရှိသလဲ?
(နိုင်ငံရေးအကျဉ်းကျ ကိုသူရိန်အောင် စီစဉ်သည့် အိပ်ဖွင့်ပေးစာမှ)
Posted by LRDP at 8:30 AM0comments Links to this post
ဒီကဗျာလေး တွေကို ကျမသတိတရ တင်ဖို့အချိန်အတော်ယူရပါတယ် သူတို့ တွေ ရဲ့ ထောင်တွင်းက
အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ရတယ်ပေါ့ -ဒါပေမဲ့ ခုတင်လိုက်ပါပြီကာယကံရှင်ပြန်သိရင်လည်းနားလည်
ပါလိမ့်မယ် --ကိုသူ ဆိုတဲ့ ကဗျာရေးသူ ဟာထောင်ဒဏ် တကျွန်းနဲ့ ရှစ်နှစ်ကျခံနေရတဲ့ NLD လူငယ်
ခေါင်းဆောင်၊ ကျောင်းသားအေ၇းကို တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းထဲမှာခုလိုကဗျာတွေရေးဖြန့် ခဲ့သူ မြန်မာ
ပြည်သူတို့ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးသိရအောင် အမေရိကန်စင်တာမှာ ပညာပေးဟောပြောဖို့ ကြိုးစား
ခဲ့တဲ့သူရိန်အောင် ပဲဖြစ်ပါတယ် ။မြန်မာ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့သြစတီးလျားက ပုဂိုလ်တစ်ယောက်နဲ့ 
စကားပြောဖြစ်တော့ ကျမ သူရိန်အောင် အကြောင်းပြောပြတဲ့အခါ - နိုင်ငံတကာက ပေးနေတဲ့ဆုတွေ
သူလိုလူမျိုးနဲ့ထိုက်တန်တယ်။သူကို လောဘီ လုပ်ပေးကြရအောင်တဲ့ --ကျမ မဲ့ ပြုံးပြုံးပြီးပြောသင့်တာ
ပဉ္စသီခ ဗင်သိုဗင် သူငယ်ချင်းတို့ ရေ
မင်းတို့ညှို့မြူသွင်းခဲ့မယ်
မင်းတို့ ရဲ့ဂီတကိုမစွန့် လွတ်လိုက်ပါနဲ့ ----
မိန်းမေယစေတဲ့ နုတ်ခမ်းပါးတစ်စုံတို့ ရယ်
နင့်နားမှာ အကျယ်ချုပ်သာ ငါ့ ကို ဖျားယောင်းလိုက်ပါ
အခြေချနေသားကျဖို့ ပြင်နေတယ်လို့ ပြောလိမ့်မယ်။။
ယနေ့နံနက် ၈:၂၀ခန့် မှာ မင်္ဂလာဈေး အပေါ်ဆုံးထပ် (၄လွှာ) ဆေးဝါးနဲ့ပရိဘောဂတွေရောင်းတဲ့အထပ်မှာ ၀ါယာရှော့ဖြစ်ပြီး
စတင်မီးလောင်ပါတယ်။ မီးသတ်ကားတွေ၉နာရီခန့်မှာရောက်လာပေမဲ့ ရေကားရောက်မလာသေးလို့မပက်ကြသေးပါဘူး။
မီးစလောင် ၈း၃၀ လောက်တွင် ဈေးခေါင်မိုးပေါ်မှာ လူငါးဦးလောက်ပိတ်မိနေပေမယ့်မီးသတ်ကားများ အချိန်မှီရောက်လာခဲ့၍
မီးသတ်လှေကားဖြင့်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဈေးကတော့ ယခုအချိန်ထိ မီးဆက်လက်လောင်နေဆဲဖြစ်သည်ဟုသတင်းရရှိသည်။
သတင်းဓါတ်ပုံ ပို့ ပေးသော အေကေ အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။။
Posted by LRDP at 1:13 PM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 4:46 AM0comments Links to this post
သခင်စိုးမြင့်ဈာပန အခမ်းအနား မှ ဒို့ ဗမာ ကြွေးကျော် သီချင်းသံ
၂၂-၅-၂၀၁၀ နေ့ ခင်း ၁၂နာရီမထိုးခင်ကနေ ခု ၁နာရီအထိ မဲဆောက် မိုးကောင်းကင်ကြီးရဲ့ထူးခြားမှု
Posted by LRDP at 10:30 PM0comments Links to this post
မသေဆုံးခင် တစ်ရက်အလို ဗုဒ္ဓဟူး နေ့အထိ ပါတီတာဝန်များကို သူ ထမ်းဆောင်သွား ခဲ့တယ် ။
ဦးစိုးမြင့် (ခ) သခင်စိုးမြင့် ပါတီနှစ်ပါတ်လည်နေ့ တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဝင် စီအာရ်ပီပီ အဖွဲ့ ဝင် တောင်သူလယ်သမားရေးရာ
ကော်မတီ တာဝန်ခံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ရန်ကုန်တိုင်းဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော သခင်စိုးမြင့်
ဘဘ ဦးစိုးမြင့် သည် ၂၀-၅-၂၀၁၀ နေ့ ခင်း တစ်နာရီတွင် ဘ၀တစ်ပါးသို့ ပြောင်းသွားသည်ဟုကြားသိရသည့်
အတွက် အဖွဲ့ ချုပ် အဖွဲ့ ဝင်များနှင့် ထပ်တူ မိသားစုနှင့် ထပ်တူကြေကွဲဝမ်းနည်းရပါကြောင်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် လူငယ်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဂန္ဓီခန်းမ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း နဝတ က လွှတ်တော်ခေါ်ယူခွင့်မပေးလျှင် လုပ်ဆောင်သင့်သည့် နည်းလမ်းသုံးသွယ် စာတမ်းကို ရေးသားပြုစုရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သဖြင့် ခေတ္တ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသည့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့၌ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တိုးမြှင့်တာဝန်ပေးအပ်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ် စက်တင်္ဘာ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၌ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် မေလ ၃ဝ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားသော ဒီပဲယင်း သွေးချောင်းစီး လုပ်ကြံမှုကြီးဖြစ်ပွါးစဉ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့်ထိမ်းသိမ်းခံခဲ့
ရာမှ ၂၀၀၃ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၃ တွင်ပြန်လည်လွှတ်လာသည် ။
(ဘိုင်အို --မဇျိမ္မ မှ)
Posted by LRDP at 2:47 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 8:52 AM0comments Links to this post
တစ်ချို့ တွေက မုန်တိုင်းကျမှန်းမသိလိုက်ပါဘူး လေပြင်းတိုက်တာတဲ့ကျမကတော့သမီးငယ်လေးကျောင်းကြိုဖို့ ပြင်ဆင်နေခိုက်
ဆိုတော့ မိုးစက်မိုးပေါက်ကြီးကြီးတွေကနေ မိုးရေကကောင်းကင်က မကျပဲ ဘေးတိုက်နီးပါးသဲလာတာမြင်တာမို့မုန်တိုင်းလာပြီ
ဆိုတာတန်းပြီသတိရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့လေပြင်းတခုပါပဲ ။လယ်ဝေးမှာရှိစဉ် က မိုးသီး တွေလက်သီးလုံးလောက်ကျ
တာကိ်ု ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုတ်ဆောင်းပြီးထွက်ကောက် ရတာပျော်စရာပေမဲ့ခုအသက်ကြီးလာတဲ့အခါ လေပြင်းကျရင် နာဂစ် ကို
ပြန်မြင်ယောင် တာမို့သိတ်ကြောက်သလို သိတ် မုန်းပါတယ်။
-ခု ကျမ သူများနိုင်ငံ မှာ လုံလုံခြုံခြုံတိုက်ခန်းလေးနဲ့ နေ နေ ပေမဲ့တိုက်နေတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းဟာ မြန်မာပြည်ဖက်မှာရော
၀င်နေသလား ဆိုတာပဲ တွေးနေမိပါတယ် ။ ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ ဖခင် ကိုတွေးပူပါတယ် အဖွါးကိုလည်းစိတ်
ထဲ စိုးရိမ်နေပေမဲ့အစိုးရိမ်အကြီးရဆုံးကတော့ တဲအိမ်သာသာလေးတွေ နဲ့ နေနေရတဲ့ အခြေခံပြည်သူလူထုအတွက်ပါပဲ။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရိပ် ကိုခိုနေရပေမဲ့ ၁၇ ရက်အတွက် နာဆာ ရဲ့ ခန့် မှန်းမုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နဲ့ လွဲပြီဆိုပြီ ထိုင်းကိုဝင်လာတဲ့မုန်
တိုင်းကို ကျမ မတားချင်မိပါဘူး ။စိတ်ထဲကပေါ့ --တော်သေးရဲ့ ငါတို့ မြန်မာပြည် မှာ မတိုက်တာ လို့ 
ဒါပေမဲ့ဒီမိုးမှာ စိုးရိမ်မိနေသေးတယ် ။ပြည်သူတွေ အတွက် ရေသယံဇာတ ယုတ်လျော့နေချိန် မိုးလိုနေတာ မှန်ပေမဲ့ 
မိုးပုလဲပန်း တွေကိုသာရွာစေ့ချင်ပါတယ်လို့တိမ်တမံတေးသွားအတိုင်း ငြီးတွားမိပါတယ် ။
ဒီနေ့မြန်မာပြည်က ဘဘ တစ်ယယောက်က ထားဝယ် စိုးရိမ်ရတယ် လို့ ပြောပြန်ပါတယ် ။ မြန်မာသတင်းကလည်း ချင်းမိုင်
မြို့ နဲ့ မိုင် ၂၀၀ အကွာကိုဗဟိုပြုနေတယ် တဲ့။ ဆုတောင်းမိပါတယ် ။
နာဂစ် လို အဖြစ် မျိုး ကျမတို့ တိုင်းပြည် နောက်နောင်ဘယ်သောအခါမှမကြုံကြရပါစေနဲ့ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံးလည်း
သဘာဝကပ်ဆိုးကြီးတွေ ရဲ့အန္တယယ်မှကင်းဝေးကြပါစေ ။
ဓါတ်တိုင်တွေ နဲ့ လူ့ အသက်
၅။ ဒေါက်တာ သန်းဝင်း ( မြောက် ဥကလာ)
Posted by LRDP at 7:07 AM 1 comments Links to this post
ကျေးဇူးကန်း တတ်သည့် သစ္စာဖောက် လူငယ်များ ရန် ကုန်တိုင်းတွင် လုံးဝ မရှိပါကြောင်း
13 ရက် မေလ 2010 http://burmese.dvb.no/news.php?id=10844
DVB သတင်းဌာန ထုတ်လွှင့် သော သတင်းတခု
တွင်ပါရှိလာသော NDF ပါတီ မှ ဦးခင်မောင်ဆွေ ၏ ပြန်လည် ခြေပပြောဆိုမှု့များသည် လွဲ မှားလျှက် ရှိပါသည် ။
၎င်း ၏ပြန်လည်ခြေပချက် ပါ မျိုးဇော်အောင် ရန်ကုန်တိုင်းဆို သည် မှာ ရန်ကုန်တိုင်း လူငယ် မှ လုံးဝ မဟုတ်ပါ ။
အဆိုပါမျိုးဇော်အောင် သည် မန္တလေးတိုင်း အရှေ့တောင် မြို့နယ် မှ ဖြစ် ပြီး ယခုတိုင် NLD ၏ အထောက်အပံ့ ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ ရှိ အမေရိကန် စန်တာ တွင် ပညာသင်ကြားနေ ဆဲ ကျောင်းသားတယောက် ဖြစ်ပါသည် ။
ထို့သို့ သော ကျေးဇူးကန်း တတ်သည့် သစ္စာဖောက် လူငယ်များ ရန် ကုန်တိုင်းတွင် လုံးဝ မရှိပါကြောင်း အားလုံးသိ စေရန် အတွက် အသိပေးလိုက် ပါသည် ။
ဦးခင်မောင်ဆွေ ၊ ဦးသန်းငြိမ်း တို့ ပါဝင် သော NDF ပါတီသည် ယခုအခါတွင် NLD ၏ ကိုယ်ပွား ပါတီ ယောင်ယောင် ၊ ညီအကို ပါတီ ယောင်ယောင် စသည့်ပြည်သူများေ၀၀ါးစေသည့် စကားအသုံးအနှုန်းများဖြင့်
မီဒီယာ များတွင် တွင်တွင်ကြီး အသုံးချ ပြောဆိုလျှက် ရှိနေ ပါသည် ။
NDF ပါတီ သည် NLD ပါတီ နှင့် လုံးဝ သက် ဆိုင်ခြင်း မရှိကြောင်းကို RFA သတင်းဌာန နှင့် အင်တာဗြူး တခု တွင် အဘဦးဝင်းတင် မှ ပြောဆိုခဲ့ ပြီး ဖြစ်သည် ကို ဤနေရာhttp://www.rfa.org/burmese/news/interview_with_U-Win-Tin_on_U_Khin_Maung_Swe-05112010125229.html
တွင် နားဆင်နိုင် ပါသည် ။
" ဦးခင်မောင်ဆွေ ပြောကြားချက် ပါ ကျနော် တို့ က လဲပဲ NLD ကို သွားပြီး တော့ဖဲ့ စည်းရုံးတာမျိုး အိမ်ရှေ့သွားပြီးတော့ငါ့အထုတ်ထဲဝင်ပါလို့ပြောတာမျိုး အန်ကယ် တို့မလုပ် ပါဘူး "
ဆိုသည်မှာ လဲ လိမ် လည် ပြော ဆို ခြင်း သာဖြစ်ပါသည် ။ ဦးခင်မောင်ဆွေ တို့ ကိုယ် တိုင် ထိုသို့မလုပ် သော် လည်း ကို မြင့်ငွေ မကွေးတိုင်း ဆို သူ မှာ ပါတီ ရုံးတွင်း သို့လာရောက်ပြီး လူငယ် အချို့နှင့်
လူငယ်ခေါင်းဆောင် အချို့အားစည်းရုံးမှု့များရှိခဲ့ပါသည် ။ ကိုမြင့်ငွေ ၏ စည်းရုံးချက်ကို လူငယ် အားလုံးမှ လက်မခံ ခဲ့ သောကြောင့် ယခုနောက်ပိုင်း တွင် မလာဝံ့ ပဲ စည်းရုံးရေး လာရောက် လုပ်ဆောင်ခြင်း မရှိတော့ ပါ ။
အဓိက ပြောလို သည် မှာ NLD လူငယ်ထု မှာ 26 ရက် နေ့က ပြုလုပ် ခဲ့ သည် တိုင်း နှင့် ပြည် နယ် လူငယ်ထုတရပ်လုံး၏ သဘော ထား အတိုင်းဆက်လက်ရပ် တည် လျှက် ရှိပါကြောင်း ပြည်သူများ သို့ 
................. ရန်ကုန်တိုင်း လူငယ်များ ကိုယ်စား... လူငယ်တဦး ........
ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုပါက lathawdar@gmail.com မှတဆင့် မေးမြန်းနိုင်သည်။
Posted by LRDP at 8:33 PM0comments Links to this post
အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကမ်းဘဲလ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ( အမေရိကန်စင်တာတွင်ပြုလုပ်)
Posted by LRDP at 9:12 AM0comments Links to this post
သုညတွေအများကြီး ရေးထားတဲ့ လက်ရေးလှ စာအုပ်ထဲမှာ
လိမ်မှ လူရာဝင်တဲ့ ရပ်ကွက်ရဲ့ ဘေးနားက အိမ်လေးတလုံးမှာ
လက်ရေးလှ စာအုပ်ရယ် …
ငါ့ အသက်တွေရယ် … နေထိုင်တယ်။
မ လာ ပါ နဲ့ ။
၁ ရက် ၅ လ ၂၀၁၀
ညဘက် ၂ နာရီ ၂၀ ကျော်ပြီ
Posted by LRDP at 11:49 PM 1 comments Links to this post
စာပေအနုပညာရှင်များ၏ ဤ ကန့် ကွက်လွှာ သည် ကျမတို့ မြန်မာပြည် ၏ အလင်းတန်းသစ်ဖြစ်ပေသည်။
မည်၍မည်မျှပင် နှင်းခြေဖိနှိပ်နေသော်လည်း ပြည်သူတို့ ၏ အသွေးသားထဲတွင် လုပ်ချင်တာလုပ်နေတာ မခံ
ဘူးဟေ့ ဆိုတဲ့ သတ္တိသွေးခိုင်မြဲနေသေးသည်။ စစ်အုပ်စု အားကိုးနှင့် ဟောင်နေသော် ဘာ က သ ညာ ကသ
ဟု စော်ကား၍ အင်တာဗျုးသွားသော အေးလွင် ရဲထွန်း တို့ ၏ ပြည့်သူရင်ထဲ ကကျောင်းသားအလံအား အသုံး
ချမှု ကိ်ု ပြည်သူတရပ် လုံး က ၀ိုင်းဝန်းကန့် ကွက် နှင့် ညီမျှသည့် ဤ ကန့် ကွက် လက်မှတ်ရှင်များအား မိမိ
မှ ဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြုပါသည်။ မိမိတို့ ရင်းတွင်း ခံစားချက်အား အင်အားဖြစ်စေသည့်အတွက် ကျေးဇူးလည်းအထူး
Posted by LRDP at 8:24 AM 1 comments Links to this post
ခွဲထွက်အစဉ်အလာဆိုးကိုသယ်ဆောင်သူ(သို့ ) ငါးဦးဂိုဏ်း
သူတွေကို ကျမတို့ တတွေ အမြင်ပြတ်ရလိမ့်မယ်။ခုည ကျမ ကိုယ့်ပါတီရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နား
ထောင်ရင်းထင်မှတ်ထားတဲ့သတင်းဆိုး၊ထင်ပေမဲ့ ဖြစ်မလာစေ့ချင်တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ကို တိတိပပ
ကျမတို့ မြတ်မြတ်နိုးနိုးတန်ဖိုးထားခဲ့တဲ့ ပါတီရဲ့ မုန်တိုင်းထန်ချိန် အကြတ်အတည်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ ပြည်သူ
လူထုနဲ့ အဖွဲ့ ချုပ်ကိုကျောခိုင်းသွားပြီး စစ်အုပ်စုကို တရားဝင် မှု အားအင် တစ်ခုဖြစ်စေမဲ့ခွဲထွက်ပါတီကို
သူတို့ ထောင်လိုက်ကြပါပြီ -
အဲဒီ့ ဆိုးရွားတဲ့အစဉ်အလာကို သယ်ဆောင်မဲ့ပုဂိုလ်များကတော့ (၁) ဦးခင်မောင်ဆွေ
(၂)ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း(၃)ဒေါက်တာဝင်းနိုင်(၄)ကော့ကရိတ်သိန်းညွန့် (၅)ဦးစိန်လှဦးတို့ ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
သူတို့ က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ဖွဲ့ စည်းလိုက်တာဖြစ်ပြီး စစ်အုပ်စု ကိုအားဖြစ်
စေဖို့ နဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာကိုခွေးကထစ် ကပဲရရ လိုက်ပါ ကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ မလိုက်နာပဲ လူနည်းစုအခွင့်အရေးဆိုတာကိုဗန်းပြပြီ ဒီလို ပါတီတခုလုံးကိုသစ္စာဖောက်သွားသူတွေ
ရဲ့ ကိုယ်စားပြုမှုကိုကျမ ပြင်းပြင်းထန်းထန်ကန့်ကွက်ချုံ့ ချပါတယ်။
အထူးသဖြင့်ကျမတို့ အင်းစိန်မြို့ နယ်က ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ ဦးစိန်လှဦးဟာရွေးကောက်ပွဲ
အောင်နိုင်ရေးအတွက် ကျမ တို့ပင်းပန်းကြီးစွာ မြို့ နယ်အနံ့အပင်ပမ်း ခံပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးပေးခဲ့တာတွေကို
မထောက်ပဲကျမတို့ အင်းစိန်ပြည်သူကိုစော်ကားရာရောက်တယ်လို့ ကျမနားလည်ပါတယ်။
မြို့ နယ်ပြည်သူကမဲထဲ့တာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်မှုကြောင့် နဲ့ မြို့ နယ်ပါတီဝင်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်
မှုကြောင့်ပါ။ ဒီမန်းဒိတ်ဟာ ပြည်သူ့ မန်းဒိတ်ဖြစ်တာကြောင့် ဦးစိန်လှဥင်္ီးဆိုတဲ့ပုဂိုလ်မပိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်ကျမက ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသူဟောင်းတစ်ဦးအနေနဲ့ ရော အင်းစိန်မြို့ နယ် လူငယ်တာဝန်ခံဟောင်း
တစ်ဦးအနေနဲ့ ပါ ဦးစိန်လှဦး ဟာအင်းစိန် မြို့ နယ် ကိုကိုယ်စားပြုသူအဖြစ်ကငြင်းဆန်ပါတယ်။
နောက်တစ်ဦး ကတော့ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ပါ ။သူက ကျမတို့ နဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သတ်ခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်း
တာဝန်ရှိသူပါ ။ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ရဲ့ ပါတီအပေါ်ရပ်တည်ချက် ပါတီမှာစွဲစွဲမြဲမြဲတည်ရှိနေတာဟာစစ်အုပ်စုက
အချိန်ကာလများစွာထဲက သပ်လျိုထားတဲ့ ပုဂိုလ်တစ်ဦးလို့ ကျမတို့သံသယအမြဲရှိခဲ့ပါတယ်။
ပါတီ မှာလူငယ်လှုပ်ရှားမှု အမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တိုင်း ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ရဲ့ကန့်သတ်တားဆီးမှုအရေးယူမှု
နအဖထံ သတင်းပေးမှုတွေကို ပါတီတွင်းက တက်ကြွသူတိုင်း ခံရတာမို့ပါတီမှာတကယ် ရဲရင့်တဲ့လူငယ်တွေ သူကြောင့်ပါတီအပြင်ရောက်သွားခဲ့ရတာ ဒုနဲ့ဒေးပါ ။
ကျမအပါအ၀င် လို့ ပြောနိုင်တာ (၂၀၀၄ စက်တင်ဘာမှာ ကျမကို ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ဦးဆောင်ပြီးပါတီ က
(၁)အချက်က စီအီးစီထဲ က စပီကာ ဦးလွင် ကို စပီကာ ဖြုတ်ဖို့ ကျမ က လူငယ်တွေ ကိုစည်းရုံးတယ်ဆိုတဲ့
စွပ်ဆွဲချက်(၂) က ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ နဲ့ ကျမက ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်(ပါတီအခေါ် အားသား
လိုင်း နဲ့ ပတ်သတ်)တယ်ဆို ပြီး ကျမအပါအ၀င် မြို့ နယ်လူငယ်ခေါင်းဆောင် ၆ဦး ကို အရေးယူပါတယ်) ။
ကျမက ဦးဆောင်သူအနေနဲ့ အရေးးယူခံခဲ့ရတာပါ၊ဒါတွေ ကို အခု ကျမက ဘာ့ကြောင့် ပြန်ပြောလဲ စာဖတ်သူ
တွေ ကို ဘာ့ကြောင့် ရှင်းပြနေတာလဲ ဆို ရင်ထဲ မှာ မချိမဆန့် ဖြစ်ရလွန်းလို့ ပါ။ ဒီဒေါက်တာဝင်းနိုင်ဟာ ဦးအောင်ရွှေကိုအမြဲမြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်ပြီး ပါတီရဲ့ နိုင်ငံရေး တိုက်နိုင်ရည်စွမ်းအားကို နင်းခြေထား
သူမို့အခု သစ္စာဖောက် လောက်ကောင်တစ်ကောင် ထင်းထင်းပေါ်ပေမဲ့ သူတို့ ကြောင့် ကိုယ့်ပါတီထဲ မှာ
သဘောထားတွေကွဲ အဖွဲ့ တွေ ကွဲသယောင် ပြည်သူတွေ ထင်မြင် မှာစိုးရိမ်မိလို့ ပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့လက လည်းကျမသူနဲ့ ပတ်သတ်တာ သတိပေးရေးသားခဲ့ဖူးပါတယ်။အာရှတော်ဝင်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း
စုကြည်ကို ခွဲစိတ်နေတုန်း အန်တီ့ကျန်းမာရေးအတွက်ပန်းစည်းလေးတွေ ကိုင်ပြီး စုပေါင်း ထိုင်သပိတ် လုပ်နေတဲ့
လူငယ်တွေကိုတားမြစ်ပြီးကျမကို ပါတီ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဘောင်ကျော်ပြီး လူငယ်တွေ ကိုဆန္ဒပြတာဦးဆောင်လို့ ဆိုပြီး အာရှတော်ဝင်အထိလိုက်လာပြီး ပါတီက ထုတ်ပစ်မယ် ကြိမ်းမောင်ဖူးသူပါ ။
အတွေးအခေါ်အယူအဆအမျိုးမျိုးကွဲလွဲခွင့်ရှိတယ်လို့တချို့ သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ် နှစ်နှစ်ဆယ်ကြာနေလို့ ပါလို့ 
လည်း ခြေပပါလိမ့်မယ်။ ညီလာခံလည်းသွားတက်ပြီးကြပါပြီ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးဖို့ လည်းရွှေတံတားတွေ
အကြိမ်ကြိမ် ခင်းပေးမဲ့စစ်အုပ်စု ရဲ့ ဟင့်အင်း ကို ကျမတို့ မကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ဒီပဲယင်းမှာအသေအရိုက်ခံခဲ့ရတာကိုတရားမစွဲနိုင်ပဲ အဆင့်တွေ
အများကြီးလျော့ပြီး လူ့ တိရိစ္ဆာန် သန်းရွေဆီ စာပို့ ပြီးပါပြီ စစ်အုပ်စုရဲ့ တုန့် ပြန်မှု ကရှင်းပါတယ် ။
ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိလို့၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ကိုရောလူထု ပါတီကိုပါ
ကျောခိုင်းထားတာပါ ။ရှင်ကြီးဝမ်းရောရှင်ငယ်ဝမ်းရော ချီးဆော်နံ လို့ ပြန်ထွက်ခဲ့ရတာတောင်
မမှတ်ရင် ဒီတစ်ခါ စစ်အုပ်စုနဲ့ သွားပတ်သတ်သူဟာ ချီးတွင်းထဲ ကျမှာပါပဲ ။
ရဲဘော်တော်တော်များများကပြောတယ် အဖြူအမဲ ကွဲသွားတာပေါ့ဟ ကောင်းတာပေါ့ လို့ ပြောတယ် ။
ဒါဟာ ဟုတ်နေ မှန်နေပေမဲ့ နအဖ ကို အင်အားဖြစ်သွားစေတာတော့မမှားပါဘူး ။
မကောင်းတဲ့ အစဉ်အလာတစ်ခုကို ပါတီထဲ က အမတ်တွေအနေနဲ့ သယ်ဆောင်လိုက်တာပိုမကောင်းပါဘူး
ဒီလို မကောင်းတဲ့ အစဉ်အလာ ကို ဦးခင်မောင်ဆွေ (စိန်လှဦးတပည့်)
ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း( ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် မယားညီအကို) တို့ ဟာ NLD နှစ်ခြမ်းကွဲတာပါလို့စတင် သယ်ဆောင်
တဲ့အတွက် ဒီငါးယောက်ဟာ(၁)ဦးခင်မောင်ဆွေ(၂)ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း(၃)ဒေါက်တာဝင်းနိုင်(၄)ကော့ကရိတ်သိန်းညွန့် 
(၅)ဦးစိန်လှဦးသမိုင်းတရားခံ တွေ ပဲဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။
မှတ်ချက် ။။ ။။ မီဒီယာများ မှ မိမိ လိုသလို NLD ၏ နောက်ဆုံးအခမ်းအနားဟု တင်ပြ ထုတ်လွှင့်နေခြင်း
သည်လည်း စစ်အုပ်စု လေသံ ကိုနောက်ယောင်ခံ၍ စစ်အုပ်စု ၏ မတရားဥပဒေများ ကို အသိအမှတ်ပြုမိ
နေသည်ကိုသတိချပ်သင့်သည်။အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးကြောင့်ဖြစ်တည်လာသောသတင်း
ဌါနများ ပို၍ သတိထားသုံးနှုန်းကြပါ)
Posted by LRDP at 12:58 PM4comments Links to this post
ခွပ်ဒေါင်းအလံ အလွဲသုံးစားလုပ်တာ စာပေနှင့်အနုပညာရှင်များက လက်မခံ
၆.၅.၂၀၁၀ နေ့က ဦးရဲထွန်းဦးဆောင်သော ၈၈ မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသားများအဖွဲ့(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)၏ ပါတီအမှတ်အသားကို ခွပ်ဒေါင်းသင်္ကေတထည့်သုံး၍ သရုပ်ဖော် ထားခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်ရှိ စာပေနှင့်အနုပညာရှင်များက ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြသည်။ယင်းကန့်ကွက်စာကို နေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ ယနေ့ ပေးပို့လိုက်သည်။ခွပ်ဒေါင်းသင်္ကေတသည် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး ဦးဆောင်ပြုခဲ့ကြသော မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများနှင့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆင့်ဆင့်
ကိုယ်စားပြုထားသည့်အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီတခုအနေဖြင့် အသုံးပြုမသင့်ကြောင်း၊ ခေတ်အဆက်ဆက် မြန်မာ့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုများးကို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်အောင် မလုပ်သင့်ကြောင်း
အဆိုပါကန့်ကွက်စာကို ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနှင့်အနုပညာရှင်ကြီးများဖြစ်သည့် ဆရာဒဂုန်တာရာ ၊ လူထုစိန်ဝင်း ၊ မောင်ဝံသ အစရှိသူ ဆရာကြီးများနှင့်ပန်းချီ၊ ဂီတပညာရှင် လူငယ် ၃၀ ကျော် လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြသည်ဟုသိရှိရသည်။
ရှစ်လေးလုံး အခြေခံပညာ ကျောင်းသူ မိမိ မှ ဤကြေညာချက်အား အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါသည် ။